होशियार ! मदिरापानले पागलपनजस्ता मानसिक समस्या निम्त्याउन सक्ने
काठमाडौँ: मदिरालाई वल्र्ड एक्सेप्टेड सोसल ड्रिंक्सका रूपमा लिइन्छ । यसको सेवनपछि मानिस लठ्ठिनेदेखि विभिन्न अशोभनीय गतिविधि पनि गर्न थाल्छ । कतिपय मानिस यसको सेवनले जीवनलाई नै धरापमा पारिरहेका हुन्छन् । किनकि, यसको अत्यधिक सेवनले कलेजो फेल हुने समस्या हुन्छ । यद्यपि, यसको खपत विश्वभरि नै हुने गरेको छ । विशेषगरी नशाका रूपमा यसको सेवन गरिन्छ । किन लठ्याउँछ त मदिराले ? केदार सेन्चुरीले नयाँ पत्रिकालाई बताएका छन् :
मदिराले एन्जाइटी, पागलपनजस्ता मानसिक समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित : शनिबार, फागुन २६, २०७४०८:३७
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउने १२ सजिला घरेलु उपायहरु यस्ता छन्
यी प्राकृतिक तरिका अपनाउनु होस् उचाई बढाउनको लागि(आसन सहित)
पहिलो पटक सेक्स गर्दा यी कुराहरुमा ध्यान नदिए आइलाग्न सक्छ डरलाग्दो समस्या !
निलो चिया पिउनाले हुन्छ यस्ता फाइदा, हेर्नुहोस् निलो चिया बनाउने विधि सहित !
७ दिन सम्म लगातार मरिच खाँदा हुन्छ यी फाइदा ! हेर्नुहोस् तरिका सहित !
यसरी १ हप्तामै खुम्चिने कपाललाई गर्नुस् स्ट्रेट, त्यो पनि सधैका लागी – अतिनै सजिलो घरेलु तरिका
के तपाई गर्मी भयो भनेर कोल्ड ड्रिंक्स खादै हुनुहुन्छ? सावधान, हुनेछ यस्तो खतरा!